सरिता गिरीलाई तत्काल पदमुक्त गर्न तरुण दलको माग – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/सरिता गिरीलाई तत्काल पदमुक्त गर्न तरुण दलको माग
सरिता गिरीलाई तत्काल पदमुक्त गर्न तरुण दलको माग
२८ जेठ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस निकट तरुण दलले सांसद सरिता गिरीलाई तत्काल पदमुक्त गर्न माग गरेको छ ।तरुण दलका अध्यक्ष जितजङ बस्नेतले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सांसद गिरीले मुलुकको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाभिमान, राष्ट्रिय एकता विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै तत्काल कारबाहीको माग गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हालसालै एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा संघीय सांसद सरिता गिरीले आफनो पदीय मर्यादा विपरीत नेपालका भूमिहरु लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई नेपालका होइनन् भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल तरुण दलको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ ।’
राष्ट्रियताको विषयमा झण्डै तीन करोड नेपाली जनतालाई चोट पर्ने गरी बोलेकोमा गिरीलाई संसद पदबाट निलम्बन गरी कारबाहीको प्रक्रिया नथालेको भन्दै तरुण दलले सराकरप्रति पनि असन्तुष्ट व्यक्त गरेको छ ।
बीमा समितिका अध्यक्ष भन्छन्– कोरोना संक्रमित देखेर भागेका होइनौं-२४ जेठ, काठमाडौं । हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछि हट्ने सरकारी रोग बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बीमा समितिमा पनि सरेको छ । वैशाख ७ मा कोरोना बीमा भनेर ल्याएको नयाँ कार्यक्रम बिहीबार एकाएक बन्द भयो । शुक्रबार फेरि वीमा कार्यक्रम खुल्ला गरियो ।
वीमा गर्नेहरुको तीव्र आकर्षण हुँदाहुँदै बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमा पोलिसी नै बन्द गर्न समितिलाई दबाव दिए । बीमा समितिले पनि तत्कालै कोरोना बीमा पोलिसी बन्द भएको घोषणा गर्यो ।अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत १५ गते बजेट भाषणमा नै भनेको अर्थात राज्यको प्राथमिकतामा परेको कोरोना वीमा कार्यक्रम एक्कासी बन्द भएपछि सबैको चासो हुने नै भयो । तथापि बजेट कार्यान्वयनमा नै ठाडो चुनौती दिएर बन्द भएको कोरोना बीमा कार्यक्रम शुक्रबार पुनः सुचारु भएको छ ।
कोरोना पोजिटिभ आए एक लाख रुपैयाँसम्मको जोखिम बहन गर्ने यो कार्यक्रम बन्द हुनुको प्रमुख कारण थियो, संक्रमितको संख्या धेरै हुनु । तर, कोरोना बीमा बन्द हुनुको अर्को कारण पनि चर्चामा आएको छ ।तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्ति पाएका बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको खासै राम्रो सम्बन्ध छैन ।
कोरोना बीमा पोलिसी बन्द भएपछि सरकारको कार्यक्रमलाई धक्का लाग्यो । र, अर्थमन्त्रीकै दबावमा पुनः यो सुचारु भएको छ । भोलि अप्ठेरो परेमा सरकारले सहयोग गर्ने अर्थमन्त्रीले बीमा समितिलाई वचन दिएपछि कोरोना वीमा कार्यक्रम फेरि सुचारु हुने भएको हो ।
आखिर विहीबार अकस्मात् कोरोना बीमा किन बन्द भयो ? अनि एकदिन पनि नबित्दै किन निर्णय फिर्ता भयो ? यिनै विषयमा हामीले वीमा समितिका अध्यक्ष चापागाईंसँग कुराकानी गरेका छौं ।
एमसीसीको बहसमा नसमेटिएको पाटो : भारतलाई बिजुली बेचेर नेपाल धनी हुन्छ ?
दार्चुलाका सिडिओको भारतलाई जवाफ- कालापानी, लिम्पियाधुरा हाम्रो भू-भाग हो, आवतजावत स्वभाविक
लकडाउनमा पनि चितवनको क्रिकेट रंगशालामा काम निरन्तर